ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးတို့ အကျင့်ပျက် ခြစားသည်ဟု ဝေဖန် တိုက်ခိုက်ခံရ - Yangon Media Group
ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးတို့ အကျင့်ပျက် ခြစားသည်ဟု ဝေဖန် တိုက်ခိုက်ခံရ
တိုကျို၊ မတ် ၁၂
အပေါင်းအသင်းများနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားသည့် စာရွက်စာတမ်းများသည် လိမ်ညာရန်အတွက် ပုံစံပြောင်းထားသည်ဟု ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက မတ် ၁၂ ရက်က ဝန်ခံပြောကြားခဲ့သည်ဟု အာဏာရပါတီအထက်တန်းအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးနှင့် သူ၏မဟာမိတ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး တာရိုအာဆိုတို့အား အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုများမြင့်တက်နေချိန်တွင် ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ထိုအမှုကိုဝန်ခံ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးသည် ရာထူးတာဝန်ယူသည်မှာ ခြောက်နှစ်ကြာပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပိုင်မြေတစ်ခုကို သူ၏ဇနီးအာကီနှင့် ဆက်နွှယ်သူအား လျှော့ဈေးများစွာပေးကာ ရောင်းချခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် အာဘေးအား ထောက်ခံသူအရေအတွက် လျော့ကျသွားခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ထောက်ခံမှုပိုမိုများပြားလာခဲ့ သော်လည်း ယခုတစ်ကြိမ်တွေ့ရှိမှုများက အာဘေးအပေါ် သံသယများ များပြားလာစေခဲ့ပြန်သည်။
အာဘေးနှင့် သူ၏ဇနီးက မြေဝယ်ခဲ့သော ကျောင်းထောင်သူ မိုရီတိုမိုဂါကူအန်ကို အဂတိလိုက်စားကာ မျက်နှာသာပေးခဲ့သည် ဆိုသည်ကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အကယ်၍ အဂတိလိုက်စားသည်ကို ခိုင်မာသောအထောက်အထားများတွေ့ရှိပါက ရာထူးမှထွက်ပေးမည်ဟု အာဘေးကဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေးက မြေနေရာ ရောင်းချခဲ့ခြင်းသည် အာဘေးအားလူထုထောက်ခံမှုကို လျော့နည်း ကျဆင်းစေသည်။
အီရန်နိုင်ငံက ဘီဘီစီ သတင်းသမားများကို အပြစ်ပေးသောကြောင့် ဘီဘီစီသတင်းဌာနက ကုလသမဂ္ဂ အနေဖြင့်
မက္ကဆီကို အပန်းဖြေ မြို့ ဆိပ်ကမ်းတွင် ရေယာဉ်ဖောက်ခွဲခံရမှုမှာ ပြည်တွင်း မူးယစ်ဂိုဏ်းသားများ
ရန်ကုန်မြို့သို့ တရားမဝင် သစ်များ သယ်ဆောင်လာသည့်ယာဉ်ကို လိုက်လံဖမ်းဆီးသည့် သစ်တောဝန်ထမ်း?
‘ Riya ရဲ့ ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့မှာ ဒီဇာတ်ကားက ဆုရခဲ့တာကြောင့် ပိုပြီးတော့ အမှတ်တ??
မြစ်သာမြစ်ကမ်းပါး နေ့စဉ် ပြိုကျနေမှုကြောင့် ကလေးမြို့နယ် တောင်ဦးကျေးရွာမှ လူဦးရေ ၂၅ဝ ခန်??
ရုရှားအသင်းမှ အနားယူကြောင်း ဆာမီဒေါ့ ကြေညာ
၂ဝ၁၉ မှာ လူကြည့်အများဆုံး အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ကတ်ထရီနာကေ့ဖ်